Saameynta Internetka Ee Shirkadaha Duulimaadka – Goobjoog News
Cilladda internet ayaa caadi u aheyd dadka Muqdisho ku dhawaad Labaatan maalmood oo internet uu maqnaa waxaa jira ciriiri ganacsi oo internetka uu abuuray .
Waxaa ka mid ah xarumaha ku shaqeyn jiray internetka oo hoos u dhac dhaqaale ku yimid iyo kuwa fududeeya duulimaadyada diyaaradaha.
Internet la’aanta waxay sababtay in tikidyada diyaaradaha ka imaanaya wadamada deriska laga soo saaro iyaga oo daabacan sidaasna loogu qeybiyo dadka Muqdisho oo badankood dareemaya internet la’aan.
Cabdi Yare Axmed, waa mas’uul ka tirsan xafiiska fududeeyo tikidyada diyaaradaha ee Som Express, waxa uu sheegay in maqnaanshiyaha internetka uu saameyn ku yeeshay xag dhaqaale iyo mid shaqo.
“ Marka loo fiiriyo fudeedka aan bulshada u fududeyn jirnay adeegga diyaaradda wax badan waxaa fududaa adeegga marka uu internetka shaqeyn jiray, halkii saac waxaa loo adeegi jiray ku dhawaad toban ilaa shan iyo toban qof, halka aan hadda u adeegno halsaac labo qof”.
Faarax Cabdullaahi Maxamed waa mas’uul ka tirsan xaafiiska shirkadda duulimaadka ee Turkish Airlines, waxa uu sheegay in maqnaashiyaha internetka ay kala kulmeen hoos u dhac dhaqaale oo weyn.
“Lacagtii aan markii hore aan qaban jirnay way is dhintay hadda, balse inkastoo shirkadda ay caalami tahay hadana si kale ayaan u maareynaa tikidyada waqtigana wuu nagu dheeraadaa “.
Mas’uuliyiinta ka shaqeeya xarumaha fududeeya duulimaadyada ayaa iyaga qudhooda waxay su’aallo ku saabsan socdaalka ay kala kulmayaan dadka shacabka ah lamana qacin karo iyada oo internet la helin.
Shirkadaha internetka bixiya ayaa waxay cadaadis kala kulmayaan ganacsatada iyaga oo weydiinayo cilladda haleeshay internetka iyo xilliga la soo deynaayo sida uu Goobjoog News u sheegay Cabdullaahi Xasan oo ka mida mas’uuliyiinta shirkadda Somaali Optical Network waxayna raadinayaan xal waara oo laga gaaro internetka.
“ Saameyn weyn ayuu waddanka ku yeeshay arrin lama filaan ah ayaa ku dhacday waxaa nooga qorsheysan dhibaatada internetka inaan si degdeg ah aan u soo celino”.
Xal lagama gaarin arrinta internetka oo ku dhawaad labaatan maalmood ka maqan Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sidoo kale maqnaashiyaha internetka ayaa waxa uu sababay hoos u dhac dhaqaale.
Soomaaliya: Mareykanka Oo Duqeyn Ku Dilay 5 Al-shabaab Ah
Yshrdn vlueen buying generic viagra cialis black
Ndfrcv qmtrbv Buy cialis online canadian online pharmacy